Champignons | November 2019
Sidee loo dhejin karaa furfuridda waddanka
Ugu Weyn Ee Champignons
Dhowr cisho ka hor intii aan la diirin, kuleylaha ayaa bilaabay inuu kaco. Wixii todobaad ah, qiimaha boqoshaada markii laga soo diro beeraha ee gobolka Kiev kor u kacay by 8-9 UAH. Sida laga soo xigtay ganacsatada suuqa suuqyada, sicirka ayaa kordhin kara xitaa in badan, sababtoo ah waxaa jira suuq yar oo suuqa ku jira. Gobolka Kiev, qiimaha bilowga asbuuca wuxuu ahaa qiyaasta 20 UAH / kg ilaa 24 UAH / kg, oo laga bilaabo laga bilaabo Arbacada, qiimaha bilawday inuu kor u kacay iyo Jimcaha beeralayda waxay iibiyeen boqoshaada 28 UAH / kg.
Tiknoolajiyada wax soo saarka mycelium (mycelium): sida loo koro mycelium guriga
Talooyinka wax ku oolka ah ee tamaandhada sii kordhaya ee dhalooyinka caaga ah ee balakoonka
Waxaynu baranaa waxa cuno cuno: sharaxaadda qalabka afka, haddii ay qaniinto iyo guud ahaan ilkaha
Guryaha dawooyinka ee dabka iyo astaamaha isticmaalka qufaca
Beerta khibrad leh waxay ogtahay in goosashada qani ku ah ay inta badan ku xiran tahay xaafadda saxda ah ee dalagyada koray. Dhammaan dhirta oo dhan ma ahan "saaxiibtinimo." Tani waxay si xun u saameyneysaa noloshooda waxayna ka xanaajin kartaa duufaan. Waa arrin aad u muhiim ah, oo ay ka mid yihiin waxyaabo kale, si ay u tixgeliyaan kuwa horey u soo saari jiray meeshan meeshan sanadkii hore. Read More
Qarsoonaanta beerashada iyo daryeelka ee chokeberry (chokeberry)
Waa maxay Bacriminta si ay u sameeyaan dayrta ka yar geedo midho leh
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Champignons 2019